Konke odinga ukukwazi ngeNetflix eSpain | Izindaba zamagajethi
INetflix eSpain. Konke odinga ukukwazi ngenkonzo yokuqukethwe yokusakaza ehamba phambili
UPablo Aparicio | | Ama-movie nochungechunge, Ukusakaza
Sekuphele isikhathi esingaphezu kwenyanga kusukela Netflix itholakala eSpain. Kulabo abangazi, yithi iNetflix ingenye yezinsizakalo ezihamba phambili ze bukela okuqukethwe kwevidiyo okusakazwayo futhi lokho kunqoba emazweni amaningi emhlabeni wonke, ikakhulukazi eMelika. Ngaphandle kokungabaza kuyindlela entsha ye- bukela i-TV online eSpain. Kungenzeka ukuthi abanye bayayazi vele, kepha kusenokungabaza okuningi abasebenzisi abaningi abanakho. Ungakhansela okubhalisile noma kunini lapho ufuna khona? Iyiphi ikhathalogi etholakalayo? Yiziphi izinhlelo nokuthi yiziphi izinketho umuntu ngamunye asinikeza zona? Kulesi sihloko sizozama ukuxazulula konke ukungabaza onayo ngale nsizakalo ukuthi, kufanele kuthiwe, ikusasa lokuzijabulisa.
1 Ungayakha kanjani i-akhawunti ku-Netflix
2 Ungasikhansela kanjani isikhokhelo se-Netflix
3 Amapulani nentengo
5 Izingane ze-Netflix
7 Qopha okuqukethwe kwe-Netflix
8 Amasu we-Netflix
8.1 Phatha i-buffer
8.2 Hlola izilungiselelo zokudlala
8.3 Khetha amashejuli kahle
8.4 Yenza imibhalo engezansi ifundeke
8.5 Thuthukisa umuzwa wakho ngezandiso ze-Chrome
8.6 Sebenzisa i-VPN
8.7 Sebenzisa izinqamuleli zekhibhodi
9 Izinkinga zeNetflix ngeMovistar
10 Ezinye izindlela zeNetflix
Ungayakha kanjani i-akhawunti ku-Netflix
1- Ake www.netflix.com/es bese sichofoza inkinobho ebomvu ethi «Qala inyanga mahhala».
2- Sikhetha uhlelo esiluthandayo.
3- Sibeka i-akhawunti ye-imeyili esifuna ukubhalisa ngayo bese uchofoza ku- «Qhubeka».
4- Sengeza indlela yokukhokha esizoyisebenzisa ekupheleni kwenyanga yesivivinyo.
5- Simaka ibhokisi bese uchofoza inkinobho eluhlaza okwesibhakabhaka ethi «Qala Ukubhaliselwa. Khokha ngemuva kwenyanga mahhala ».
6- Njengoba kungenakuba ngenye indlela, sichofoza ku- «Qhubeka».
7- Okulandelayo, sikhetha ukuthi yimaphi amadivayisi esizobuka kuwo iNetflix bese uchofoza ku- «Qhubeka».
8- INetflix isivumela ukuthi sisebenzise amaphrofayili ahlukahlukene womsebenzisi. Sifaka lezo esivumela zona, uma sifisa, bese uchofoza u- "Qhubeka".
9- Ngezansi sibonisa ukuthi ngabe omunye wabasebenzisi ungaphansi kweminyaka engu-12 ubudala. Uma kunjalo, sikukhombisa lokhu ukuze sikunikeze okuqukethwe okufanele iminyaka yakho. Ngemuva kwalokho sichofoza ku- "Qhubeka".
10- Ukuze sazane kancanyana futhi sikwazi ukusinikeza okuqukethwe, ngezansi sizomaka njengesiqondile noma esibi noma yisiphi sezihloko esikhonjiswa zona. Uma sesimake u-3, sichofoza ku- «Qhubeka».
11- Futhi besizobe sesivele senziwe i-akhawunti. Manje, ngaso sonke isikhathi lapho singena kuzofanele sivule iphrofayili yethu.
Ungasikhansela kanjani isikhokhelo se-Netflix
INetflix isinikeza ithuba lokukhansela okubhaliselwe nganoma yisiphi isikhathi. Yize kungenziwa kusuka kuzilungiselelo ze-akhawunti, into eqonde ngqo ukuchofoza kuyo LONTO bese uchofoza ku- "Khansela Okuphelele". Uma ufuna ukuthola imininingwane mayelana nokuthi yini eyengeziwe, ungabheka ibhokisi (1). Njengoba ubona esithombeni, ukukhanselwa kuzosebenza lapho isikhathi sethu sokubhalisa siphelile futhi idatha izogcinwa izinyanga eziyi-10, lapho singavuselela i-akhawunti noma kunini lapho sifuna khona.
Njengoba ukwazi ukubona kusikrini esedlule, iNetflix iyatholakala kulezi zinhlelo ezilandelayo:
Okuyisisekelo: nge intengo € 7,99, Singabona kuphela okuqukethwe kwayo ku- isibuko ngesikhathi esifanayo. Itholakala kuphela ku- Ikhwalithi ye-SD, eyanele izikrini eziningi, kepha iyaxhuga kancane uma isikrini egumbini lethu lokuphumula sikhulu.
Estándar: ngephakeji eliphakathi, eline- intengo € 9,99, singakujabulela Okuqukethwe kwe-HD, okungaphezu kokwanele kumathelevishini amaningi esinawo egumbini lethu lokuphumula. Singabona okuqukethwe ku- izikrini ezimbili ngasikhathi sinye.
Premium: iphakethe eliphezulu line- Intengo ye- € 11.99. Siyayibona kuze kube izikrini ezine ngasikhathi sinye futhi iyatholakala nge I-Ultra-HD, ephelele kulabo abanesikrini esikhulu.
Kuzo zontathu izinhlelo singabona okuqukethwe okufanayo: lonke ikhathalogu INetflix yezwe lethu.
INetflix iyi-cross-platform, okusho ukuthi iyatholakala kuzo zonke izinhlelo ezisebenzayo nezinhlobo eziningi zamadivayisi. Singabona okuqukethwe kwe-Netflix ku:
Amakhompyutha- Ngokuqondile kusuka kusiphequluli esisebenzisanayo se-HTML5 noma se-Silverlight.
Izingcingo namaphilisi: I-Android, iOS neWindows Phone.
I-SmartTV: Samsung, LG, Philips, Sharp, Toshiba, Sony, Hisense, Panasonic.
Setha amabhokisi aphezulu / abadlali beMedia: I-Apple TV, iChromecast, iVodafone.
Amakhonsoli: I-Nintendo 3DS, i-PS3, i-PS4, i-Wii U, i-Xbox 360 ne-Xbox One.
Abadlali be-Blu-ray abanekhono "elihlakaniphile"I-LG, iPanasonic, iSamsung, iSony neToshiba.
La Ukuxhumeka okuncane okunconyiwe ukubuka okuqukethwe kwe-HD 5mb, Esingabona ngakho okuqukethwe ezinqumweni ezilandelayo (ezinye iziphequluli azinemininingwane):
I-Google Chrome (37 noma kamuva) kufika ku-720p.
IMicrosoft Edge ifike ku-1080p.
I-Internet Explorer (11 noma kamuva) kuze kufike ku-1080p.
I-Safari ifike ku-1080p ku-Mac OS X 10.10.3 noma kamuva.
Ngokusobala, akekho umuntu obabayo ngoshukela futhi ikhwalithi yokudluliswa (kuzoba nokusikeka okumbalwa, ngokwesibonelo) kuzoba ngcono ukushesha ukuxhumana kwethu.
Uma unabancane ekhaya, i-Netflix inikeza a isigaba sezingane lokho kungakuthakazelisa. Njengoba abasebenzisi bekwazi ukufinyelela kulo lonke ikhathalogi, ngokungafani nezinye izinsizakalo, singabona inani elikhulu lokuqukethwe ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-12 ubudala. Kuneminye imisebenzi eSpain enekhathalogi engaphezulu yezingane kuneNetflix kodwa, ezimweni ezinjalo, ikakhulukazi kuma-movie, okuningi kwalokhu okuqukethwe kutholakala kuphela uma kuqashwa iphakheji, njengama-movie noma uchungechunge. Into enhle ngeNetflix ukuthi konke okukhona, siyabona.
Ukwazi ukuthi lokhu okuqukethwe kukuthakazelisa yini, njengakho konke okuphathelene neNetflix, into enhle kakhulu ukuthi uqale inyanga yesilingo bese uzihlola wena kepha, njengoba ngizosho ngezansi, kufanele ukhumbule ukuthi iNetflix Spain incane lezi izinyanga zakhe zokuqala ezweni lethu.
Umbuzo awunayo impendulo elula. Uma umbuzo ubuzwa manje (Novemba 2015), ngingalokotha ukusho lokho eSpain, cha. Hhayi okwamanje. Lezi zinhlobo zezinsizakalo ziyikusasa lokuzijabulisa, kepha hhayi zonke ezikhona. Ikhathalogi yamanje yeNetflix, ekhuluma njalo ngeSpain, iyindlala kakhulu, kangangoba, uma uyizama, kungenzeka ukuthi ukhansele okubhalisile ngemuva kwenyanga yokuqala. Inkinga yeNetflix ukuthi njengamanje sibona ikhathalogi encane futhi kungekudala siyeka ukuyisebenzisa, kuhlanganiswe neqiniso lokuthi asinayo indlela elula yokubona ukuthi okuqukethwe kwayo kuyini. Uma sibona okuncane manje nasesikhathini esizayo asikwazi ukuqinisekisa ukuthi ikhathalogu ithuthukile, banenkinga enkulu. Kufanele basinikeze ngandlela thile ukubona ukuthi kufanele yini ngokuzayo noma iningi lethu lizosala nombono wokuqala futhi omubi.
Qopha okuqukethwe kwe-Netflix
INetflix ayikuvumeli ukurekhoda ngokwendabuko okuqukethwe okunikezayo, kepha kunezindlela ezihlale zikhona. Ngalokhu, sizodinga isoftware yomuntu wesithathu esivumela ukuthi sithwebule ividiyo nomsindo odlalwa kukhompyutha yethu, njengalezi zinhlelo ezilandelayo:
I-ScreenFlow ku-Mac: uhlelo lokusebenza ebengilusebenzisa iminyaka futhi angikaze lwehluleke I-ScreenFlow. Kuyiqiniso ukuthi kuyabiza, kepha ine-video editor yayo futhi ingcono (kwezinye izici) kune-iMovie. Uma uyizama, uzoyithanda. Uma ufuna inketho yamahhala, kuzofanele usebenzise i-QuickTime nolunye uhlelo lokusebenza olukuvumela ukuthi uthwebule umsindo, ongakhululekile neze.
I-CamStudio ku-Windows: Uhlelo lokusebenza lwamahhala abasebenzisi be-Windows abaluthandayo I-CamStudio. Izindaba ezinhle ukuthi, ngaphezu kokungabizi i-euro eyodwa, iqopha ividiyo nomsindo.
Okukhululekile kuLinux: inketho yomthombo ovulekile wamahhala owenza okucishe kufane neCamStudio. Ungayilanda kusuka ku- LAPHA.
Ngokusobala, ngayinye isebenza ngendlela eyodwa futhi angikwazi ukwenza okokufundisa lapha kuhlelo ngalunye.
INetflix inemenyu eyimfihlo. Ukufinyelela kule menyu kufanele sicindezele izinkinobho ze-Shift + Alt (bese uqhafaza, uma siku-Mac) kunoma iyiphi ividiyo yeNetflix. Uma sesikuleyo menyu siya ku- «Stream Manager» futhi lapho singakwazi ukuphatha i-buffer. Uma ukuxhumana kuhle kakhulu, singakwazi uyibeke phansi, okuzokwenza ibukeke kangcono.
Hlola izilungiselelo zokudlala
INetflix izosivumela ukuthi sibuke okuqukethwe ku-HD (uma kutholakala) inqobo nje uma sinokuxhumana okungenani okungu-5mb. Kepha akukho ukusetshenziswa kokuba nethuba uma sinokulungiswa okungalungile. Ukuqinisekisa ukuthi siyibona ngekhwalithi ephezulu kakhulu okufanele siyenze:
Sifaka isikhombi ekhoneni eliphezulu kwesokudla bese siyachofoza I-akhawunti yakho.
Manje ake Izilungiselelo zokudlala.
Lapha sizokhetha ifayela le- ikhwalithi ephezulu kakhulu, inqobo nje uma uxhumano lwethu lushesha. Uma sibona ukuthi kukhona ukusikeka noma sikubona kunamaphikseli, singanciphisa ikhwalithi.
Khetha amashejuli kahle
Noma nini lapho kungenzeka khona, kungcono ukubuka ama-movie, uchungechunge noma ama-documentary avuliwe amahora lapho abantu bengekho emakhaya ngokuvamile. Yize kungafanele ukuthi kungahambi kahle, lolu hlobo lwezinsizakalo luyahlupheka lapho kuhlwa kuze kube ngu-2 ekuseni. Ungasho ukuthi kusuka ngo-20 ebusuku kuya ku-2 ekuseni yilapho kunabantu abaningi abacela okuqukethwe futhi ikhwalithi ivame ukwehla. Uma uzobona i-movie futhi uba nesikhathi samahhala ngaphandle kwalawo mahora, thatha ithuba.
Yenza imibhalo engezansi ifundeke
Uma sibeka imibhalo engezansi ukuyifunda, akunjalo? Futhi ukuze sizifunde kuzofanele sizibone kahle izinhlamvu. Uma indlela imibhalo engezansi ekhonjiswa ngayo ayiyona engcono kakhulu kuwe, kufanele ushintshe indlela ababonwa ngayo. Ngalokhu sizokwenza okulandelayo:
Sichofoza I-akhawunti yakho.
Siya Ukubukeka kwemibhalo engezansi.
Okulandelayo uzobona okufana nokuthwebula kwangaphambilini. Lapho khetha ukucushwa okuhle kakhulu kwakho.
Thuthukisa umuzwa wakho ngezandiso ze-Chrome
Yize iNetflix isivele inakho konke okudingayo, isengathuthukiswa uma sifaka izandiso kusiphequluli se-Chrome njengokulandelayo:
I-Flix Plus: Kuzoqeda ama-Spoilers, ukuthi sonke thina ma-moviegoers / seriéphiles abe ne-phobia ekhethekile. Kuzosisiza futhi ukubona izincomo, imininingwane yokuqukethwe, njll. Ungayilanda kusuka ku- LAPHA.
Isithuthukisi seNetflix: Ngalesi sandiso singabona imininingwane esefayilini, kuma-trailer, emibonweni nakuzo zonke izinhlobo zolwazi ezizosisiza ukuthi sazi ukuthi ibhayisikobho noma uchungechunge lufanele yini. Ungayilanda kusuka lapha.
Kukhona okunye okuqukethwe okutholakala kuphela uma sisendaweni efanele. Kuyinto engingajwayele ukuyenza, kepha kunabasebenzisi abaningi beNetflix abakwenzayo ukuze bakwazi ukufinyelela kokuqukethwe okungadingeki bakubone endaweni yabo.
Sebenzisa izinqamuleli zekhibhodi
Uma ubuka iNetflix kukhompyutha, kungcono ukulawula ividiyo kusuka kukhibhodi ngezinqamuleli ezilandelayo:
Ibha noma u-Enter: dlala / misa isikhashana.
Ukhiye we-F: faka isikrini esigcwele.
Ukubalekela: phuma esikrinini esigcwele.
Shift + left: buyisela emuva.
Shift + kwesokudla: phambili.
Phezulu / Phansi: khulisa / nciphisa ivolumu.
Ukhiye M: thulisa.
Izinkinga zeNetflix ngeMovistar
Baningi abasebenzisi beMovistar abakhalaze ngekhwalithi yokudluliswa kweNetflix. Opharetha usevele unikeze uhlobo lwayo lwezehlakalo, esho ukuthi awukhawuleli ithrafikhi ukulimaza umncintiswano kanti iNetflix izonikeza inguqulo yayo ngoDisemba. Inkinga eyenza iMovistar ingazwani neNetflix inegama, iPeering. Kuyini Ukuhlola? Ukubhekisisa yisi «ukuxhumanisa ngokuzithandela kwamanethiwekhi we-Intanethi azimele ukuze kushintshwe ithrafikhi yamakhasimende enethiwekhi ngayinye ". Ungasho ukuthi kunjalo isivumelwano phakathi kwezinkampani Ukunikezela ngensizakalo engcono, isivumelwano esibonakala sengathi, okwamanje, iMovistar neNetflix abakasayini, yingakho ikhwalithi ephansi kunabanye opharetha ababengayisayina.
Ezinye izindlela zeNetflix
UYomvi uyimbangi yokushaywa yiNetflix njengamanje. Ikona ephethwe nguMovistar Futhi, yize ikhathalogi ingaphelele kunayo yonke emhlabeni futhi inokuqukethwe okutholakala ngokuqasha amaphakheji athile, okwamanje inekhathalogi enkulu kakhulu kuneNetflix. Kukhona okutholakalayo amafilimu angaphezu kuka-2.000 XNUMX, uchungechunge nemibhalo futhi sizoba nazo zitholakale kuze kube umnqamulajuqu (ifilimu ngayinye, uchungechunge noma i-documentary izotholakala isikhathi esithile), kwesinye isikhathi okuyizinyanga ezimbalwa.
Uma iphakethe leCinema likhokhelwe, ikhathalogu izokwanda kakhulu futhi ngokufanayo nochungechunge. Inkinga ukuthi iphakethe le-movie libiza u- € 9 nephakheji yochungechunge engu- € 5. Into enhle ngeNetflix ukuthi singayibona yonke ikhathalogu yayo ngenkathi itholakala, ngaphandle kwemikhawulo esinika amazinyo amade ukubona iphosta ye-movie esingakwazi ukuyikhiqiza.
Insizakalo efanayo ne-Yomvi yiWuaki.tv, enomehluko obalulekile, esingakwazi qasha ama-movie. Ngaphezu kwalokho, ama-movie esingawaqasha ku-Wuaki.tv anenani eliphansi kunezinye izinsiza ezifana ne-iTunes noma i-Google Play, ukuze sikwazi ukubona amanye ama-movie nge- € 1.99.
I-Wuaki.tv isinikeza ithuba lokubhalisa mahhala, kepha ikhathalogi incane futhi ayinalutho uma singakhokhi okuthile. Vele, uma esikufunayo kwinsizakalo yohlobo lwesitolo samavidiyo, mhlawumbe iWuaki.tv kufanele kube ukukhetha kwethu.
Uma lokho onentshisekelo kukho ukukwazi ukubuka ama-movie ngokufunwa njengezitolo ezindala zamavidiyo, enye inketho yi-Nubeox. KuNubeox, insiza okungeka-Antena 3, sithola noma iyiphi i-movie esivele ikhona ku-DVD / Blu-Ray, futhi kaningi ngentengo ephansi kunakwamanye amapulatifomu. Ngaphandle kokungabaza, kungenye indlela okufanele ucabange ngayo ukubona i-cinema ngokufunwa. Vele, lungiselela iphothifoliyo. Yilokho okufanele ukwazi ukukhetha ukuthi yikuphi okuqukethwe ozokubona.
ITotalChannel isinikeza isamba seziteshi eziyi-12 zokukhokha, njenge-AXN noma i-FOX. Kusakazwa ama-movie alinganiselwa ku-100 nochungechunge kulezi ziteshi njalo ngesonto, okwenza kube insizakalo okufanele icatshangelwe. Iphinde isinikeze ithuba lokuqopha okuqukethwe nakho konke abakunikezayo kungabonwa ngokufunwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Ama-movie nochungechunge » INetflix eSpain. Konke odinga ukukwazi ngenkonzo yokuqukethwe yokusakaza ehamba phambili
yudeisy Rodriguez kusho
thola lokho okuphakamisa
Phendula u-yudeisy Rodriguez
I-InnJoo InnWatch 2, i-SmartWatch eyindilinga futhi engabizi [BUYEKEZA]
Izizathu ze-6 zokuthi kungani ungafanele uthenge i-smartphone ephezulu